Madheshvani : The voice of Madhesh - चुनौती हुँदाहुँदै पनि हामी विचलित भएका छैनौं : रामचन्द्र चौधरी
रामचन्द्र चौधरी, मेयर, चन्द्रपुर नगरपालिका, रौतहट
० चन्द्रपुर नगरपालिकामा कोरोना रोकथाम कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
— नेपालमा कोरोनाका कारण चैत ११ गतेबाट लकडाउन सुरु भयो । त्यसपछि हामीले एक सय बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण ग¥यौं । चार वटा नगरपालिका मिलेर सो क्वारेन्टाइन बनायो र त्यसको अगुवाई चन्द्रपुर नगरपालिकाले ग¥यो । गुजरा नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका र चन्द्रपुर नगरपालिका मिलेर क्वारेन्टाइन सञ्चालन ग¥यो । त्यो क्वारेन्टाइनमा हामी सबै कुराको राम्ररी व्यवस्थापन गरेका थियौं । त्यसपछि हामीले आइसोलेसनको पनि महसुस ग¥यौं र चारै नगरपालिका मिलेर चन्द्रपुर आइसोलेसन पनि स्थापना ग¥यौं । आजको मितिमा हाम्रो आइसोलेसनमा ३५ जना कोरोना संक्रमित उपचाररत छन् । अहिलेसम्म चन्द्रपुर नगरपालिका कोरोनाका विरुद्धमा सक्रियताका साथ लागिरहेका छौं ।
० तपाइँहरुले अहिले कोरोनालाई नियन्त्रण अवस्था राख्नुभएको छ ?
— निश्चितरुपमा चन्द्रपुर नगरपालिकामा अहिले कोरोनाको भयावह अवस्था छैन । हामी जोडतोडका साथ नियन्त्रण तथा रोकथाममा लागेका छौं । बुधबार मात्रै हामीले ४१ जनाको स्वाब टेष्ट गर्न पठाएका थियौं, जसमा २८ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आयो । २८ जना संक्रमितमध्ये २४ जना इलाका प्रहरी कार्यालयका कर्मचारीहरु छन् ।
० चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहट जिल्लाकै जनसंख्या र क्षेत्रफलको हिसावले सबभन्दा ठूलो नगरपालिका हो । कोरोना नियन्त्रण गर्न कतिको चुनौतीहरु आउँछन् ?
— ठूलो जनघनत्व र क्षेत्रफलको हिसावले कोरोना नियन्त्रणमा चुनौतीहरु छन् । अहिलेसम्म हामीलाई संघीय सरकारले कुनै किसिमको सहयोग गरेको छैन । प्रदेश सरकारले सुरुमा राहतस्वरुप १५ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । अहिले जे जति हामी गरिरहेका छौं, स्थानीयस्तरबाट नै गरिरहेका छौं । यसबाट हामी विचलित भएका छैनौं । किनभने हामी जनताका प्रतिनिधि हौं र हामीसँग भएका सम्पूर्ण स्रोत साधन जनताकै लागि हुन् । हाम्रो पहिलो कर्तव्य पनि हो कि जनताको जीउज्यानको सुरक्षा गर्ने । त्यसपछि मात्रै अन्य कुराहरु आउँछन् । यस्ता चुनौती हुँदाहुँदै पनि हामी विचलित भएका छैनौं ।
० सुरुवाती अवस्थामा चन्द्रपुरमा कोरोना कसरी फैलियो ?
— चन्द्रपुर नगरपालिका कोरोनाको उच्च जोखिम हुनुको मुख्य कारण हो कि हाइवे यहीबाट गएको छ । जिल्लाको एउटा मात्रै गेटवे पनि चन्द्रपुर नै पर्छ । त्यसकारणले सुरुमा हामीले त्यो नियन्त्रण नगरेको कारणले पनि कोरोनाको जोखिम बढ्यो । तर जोखिम हुँदाहुँदै पनि सुखद कुरा के छ भने कोरोनाबाट अहिलेसम्म चन्द्रपुर नगरपालिकामा एक जनाको पनि मृत्यु भएको छैन ।
० कोरोनाको एक मात्र उपायको रुपमा अहिले मुलुकभर निषेधाज्ञाको अवस्था छ । चन्द्रपुरमा निषेधाज्ञा वा लकडाउनको अवस्था के छ ?
— लकडाउन वा निषेधाज्ञा हुँदाहुँदै पनि आमनागरिकको जनजीवन सामान्य बनाइराख्न हामीले यो बीचमा केही खुकुलो बनाएका छौं । हुन त जिल्ला प्रशासनले यो भाद्र मसान्तसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । स्थानीय प्रशासनले गरेको कार्यबाट जनताले अलिकति राहत महसुस गरेका छन् । अहिले पनि चन्द्रपुर नगरपालिका लगायत रौतहट जिल्लाभरि नै भाद्र महिनासम्म निषेधाज्ञा जारी रहेको छ । तर, पनि हामीले बैंकिङ्ग कारोबार सुचारु राखेका छौं । त्यस्तै, मालपोट कार्यालय र नापी कार्यालय खोलेका नै छौं । नगरपालिकाको अति आवश्यकीय बोहकका कार्यालयहरु बन्द गरेका छौं । यो निषेधाज्ञाले गर्दा जनतालाई पीडा त भएकै हो तर पनि विचलित भएका छैनन् ।
० व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न कस्तो किसिमको मोडालिटी अपनाउनु भएको छ ?
— सुरुमा हामीले बिहान ७ बजेदेखि ११ बजेसम्म पसल खोल्ने समय निर्धारण गरेका थियौं । बैंकहरुका लागि १० बजेदेखि १२ बजेसम्मको समय निर्धारण ग¥यौं । अति आवश्कीय वस्तुहरु बिक्री वितरणका लागि ११ बजेसम्मका लागि समय दियौं । त्यसबेलामा मान्छेहरुलाई किनमेल गर्न सजिलो हुन्थ्यो । तर, बजार सुनसान नै हुन्थ्यो । काठमाडौंमा निषेधाज्ञा हटाइएको भन्ने हावाले पनि अलि बढी नै खुकुलो भएको जस्तो देखिन्छ । मान्छेहरुको चहलपहल बढेको छ । काठमाडौंमा निषेधाज्ञा हटाइएको कुरा आएपछि यहाँ पनि स्वतःस्फूर्त पसलहरु खोल्न लागेका छन् ।
० समय निर्धारण गरेर पसल खोल्न दिने निर्णयले त झन् कोरोनाको जोखिम बढाउँछ नि ?
— सुरुमा जसरी नेपालभरि नै लकडाउन घोषणा भयो त्यो बेला राज्यको भाषा र कार्यशैलीले गर्दा जनता डराएका थिएनन् । तर दोस्रो पटक जब लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी भयो, अनि जनता चेतनशील भए । यता केही दिनदेखि नेपालमा पनि कोरोनाबाट मर्नेको संख्यामा वृद्धि हुँदा जनता सजग भएर अनावश्यकरुपमा बजारमा निस्किन बन्द गरे । पहिला एउटा घरपरिवारबाट बजारका लागि झुण्डमै निस्किन्थ्यो तर अहिले को जाँदा आवश्यकता पूर्ति हुन्छ, एक जना गए पनि हुन्थ्यो । त्यसले गर्दा अहिले जोखिम बढेको छैन । अहिलेको अवस्थामा कोरोनाबाट जनता सचेत अवस्थामा छन् ।
० लामो समयदेखि निषेधाज्ञा वा लकडाउनको अवस्था छ । जनजीवन कतिको कष्टकर बनेको छ ?
— निश्चितरुपमा लामो समयदेखि लकडाउनको अवस्था छ । झण्डै ६ महिना हुन लागेको छ । यो ६ महिनाको अवधिमा सामान्य जनताको जनजीवन अस्तव्यस्त भएका छन् । व्यवसायीहरुलाई पनि यसबाट ठूलो मर्का परेको छ । यसको सबभन्दा बढी प्रभाव शैक्षिक संस्थामा परेको छ । यी सबले गर्दा त्राहिमाममा जनता छन् । अब पनि लकडाउनलाई लम्ब्याइयो भने अवज्ञा हुने सम्भावना देख्दैछु । जनता अहिले भोकले मर्ने अवस्था आउन थालेको छ । त्यसकारणले राज्यले दैनिक ज्यालादारी गर्ने जनताका लागि व्यवस्थापन गर्नैपर्छ ।